Saamaynta Cudurka Duumadda iyo Africa. |
Saamaynta Cudurka Duumadda iyo Africa.
Hargeisa(GNN):-an iyo waagaas waxaa socday cilmi baadhisyo kala duwan oo lagu soo saari jirey xog iyo daawooyin ku haboon oo xanuunkan dumadda lagaga hortagi karo, ugu danbayntii
Daraasad lagu oogaaday aadanaha“dadka” ku nool adduunka haatan ayaa lagu qiyaasa 7.5 bilyan oo qof, darasadan ayaa ah june,2016 “World Population Clock”. Hadaba in kudhaw ama kala badh dadyawga ku nool addunka oo udhiganta inka badan saddex billyan ayaa qaba ama halis u ah xanuunka duumada “Malaria”.
Xanuunkan loo aqoonsaday “Malaria” ama Duumada waxaa addunkan laga ogaaday mudo kabadan afar kun oo sano ka hor, oo ku taariikhaysan 2500BC “. Iyadda oo kalmadani “Malaria” asalan ahaanteedaka timi luuqada taliyaaniga waxana erey bixiyey dhakhtar taliyaani ah. Qarnigii afaraad 4th centuryayaa quburo ku xeel dheer cilmiga caafimaadka oo kazoo kala jeeda dalalka shiinaha, giiriga iyo talyaaniga; ay ogaadeen qaababka
iyo asbaabaha keena Cudurka dumadda, iyada oo isla waqtigaas adduunka looga aqoonsaday dumadda xanuun ka jira addunka.
Tan iyo waagaas waxaa socday cilmi baadhisyo kala duwan oo lagu soo saari jirey xog iyo daawooyin ku haboon oo xanuunkan dumadda lagaga hortagi karo, ugu danbayntii daawadda hada loo yaqaan “Quinine” oo ah tan ilaa hada loo isticimaalo ama lagu daaweeyo dumadda ayaa helideeda lagu guulaystay qarnigii 17 naad (17th centry).
Duumaddu waa cudur aad u halis badan,waana xanuunada ugu faca wayn adduunka oo mararka qaarkood dhimasho sababa, caadi’yan waxa uu ka imaada cudurkani noole ah kaneeco, taasi oo ahnooca dhadiga ah ee kaneecadaoo cuna ama qaniina aadanaha. Qaniinyadaas ayaa ah candhuuf ama dheecan sun ah oo ay kaneecadu ku shubayso dhiigaga, suntaas oo toos u weerarta unugyada dhiiga ee cas cas, amaba beerka aadanaha. Dadka uu xanuunkan duumaddu haleela waa dad aad u bukooda oo leh qandho heer sare ah, qarqaryo gariir, iyo jirro hargab oo kale ah, iyo matag. Dhamaan astaamahani waxa uu qofku arki kara muddo laba isbuuc kadib ah marka kaneecadu qofka qaniinto. Duumaddu Waa xanuun sababa dhimasho badan, lakiin se waa laga hor tagi karaa, lana daawayn kara.
Sanadii 2015ka hayadaha caafimaadka ka shaqeeya ee adduunka waxa u diwaan gashanaa oo ay ka wadeen olalaha la dagaalanka duumadda 106 dal, oo ka mid ah 198ka dal ee uu adduunka oo dhami ka kooban yahay. Hadaba 95 dal oo ka mid ah 106 da dal ee ay Hay’adda Caafimaadka adduunka ee WHO oo kaashanaysa hayaddo kale ay kasoo diyaariyeen macluumaadkii Cudurka duumadda sanadkii tagey ee 2015ka, ayaa 214 million oo xaal baadhis oo duumo ah oo la ogaaday xogtooda. (baadhidaasoo u dhiganta 149 ila 303 million oo qof) inay qaadeen xanuunka duumadda, waxa u dhintay dad gaadhanaya 438,000 (Afar boqol iyo sideed iyo soddon kun oo qof).intii kale na lagala tacaalayo. Intani waa xadiga macaluumaadkooda laga helay goobaha caafimaadka oo kaliya, lakiin waxa hubaal ah Akhriste inay intan xaqiiqda dhimashada iyo xaqiiqda dadka duumaddu haysay ka badantahay intaas, oo aan la gaadhin meel badan oo ka mid ah dalalka adduunka, khaasatan dalal badan oo Africa iyo Aasiyaba ah sababo amni iyo xaaladaha miiga awgood, qarada Africa waa dalalka ay ugu saamaynta badantahay xanuunka duumaddu. Tusaale ahaan tirada dhimashada ee aan kor kusoo xusnay sanadii 2015 ka boqolkiiba sagaashan waa qaarada afrika.
Celcelis ahaan waxa ay warbixinadu sugayaan in 660 kun(lix boqol iyo lixdan kun oo qof) oo caruur u badani ay sanadkasta Africa u dhintaan xanuunka duumadda.
Wax yaabaha ugu naxdinta badan, !in sanadii 2013kii cudurka duumaddu ku dishay qaarada Africa 437kun oo caruur ah oo aan wali ka bixin Afartankii cisho ee noloshooda u horaysay. Halka caruurta adduunka oo dhan u dhimatay xanuunkani ay ka ahayd 453 kun, tirada guudnasa se ahayd 538ku oo qof sanadkaas. Kaliya 16 kun oo caruur ah oo da’doodu 5 jir ka yar tahay ayaa uga dhintay qaradaha kale ee adduunka oo dhan, hadda caruurta afrika ku dhimatay afartan cisho iyaga oon jirin ayay duumo laysay.
1. Inaad ugu horayn aad naftaada iyo ta cida aad masuulka ka tahay aad ka hubiso intee in leeg ayaad/ayey halis ugu jirtaan inaad duumo ka qaaddo/qaadaan, adiga oo hubinaya deeganka aad ku nooshahay, amaba aad u safarayso xaladeeda caafimaad si aad uga sii gaashamato oo aad uga sii sahay qaadato, iska hubi waddan ama magalo kasta inta aanad aadin ama tagin.
2. Iska jir inaad habeenkii seexato ama aad ka ag dhawaato hoyga ama meelaha kaneecaddu iskugu timaado, sida meelaha biyo fadhiisinka leh. Ceel, wabi, haro, tog, doox, dhaam, iyo wixii la hal maala. Iskuna day inaad habeen kii dhex seexato shabaqa laga hoos seexdo kaneecda, habeenkii hadii aad isticimaashona hubi in ay leedahay daloolo ay kazoo dhex gudbi karto, inta badan kaneecadu, waanad buufin karta gurigaaga adiga oo istimaalaya daawooyinka ku haboon.
3. Hadii aad ku nooshay, waqti gaabanba ha ahaato e meelo ay kaneecadu kaa ag dhawdahay isku day habeenkii iyo fiidkiiba inaad ku labisato dhar adag si aanay qaniinyada kaneecadu uuga soo dhex bixin amaba dhar aan qafiif ahayn oo hoostana u dheer ama dabooli kara jirkaaga dhamaantiisba.
4. Hadiiba aad isticimaasho daawooyinka kasamaysan dhiiqada ama dareeraha ah “cream” inaad jidhkaaga mariso, hubi had iyo jeer inaanad wax kale ka danbaysiin, ha ahaato daawadu ama cream ku midka ugu sareeya ee maqaarkaga saarnaada markasta. Taariikhda dhacista daawaddu inaad iska hubisaa waa muhiim.
5. Hadii ba’aad iska shakido amaba aad xanuun yar oo ka mida astaamaha aan kor kusoo xusnay aad isku aragto isticimaal daawooyinka ka hortaga ah ee loogu talo galay duumadda. Dawooyinka ka hortaga ah waad isticimaali karta markasta ka hor inta aanad safrin amaba aanad socdaal aag badalasho ah aanad galin; inta badan dawooyinka ka hortagu waa qaar socda maalmo ama isbuucyoba sidaas darteed isku day inaad dhamaysato fadlan.